Eindhoven ရှိရှေ့နေ | Law & More - Eindhoven အတွက် advocatenkantoor
EINDHOVEN တွင်ရှေ့နေတစ်ယောက်လိုအပ်ပါသလား။ ဆက်သွယ်ရန် LAW & MORE!
သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး လား၊ ဥပဒေရေးရာပြwithနာတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောပုဂ္ဂလိကတစ် ဦး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပါ Law & Moreကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကသင့်ကိုကူညီရန် ၀ မ်းသာပါသည်။ At Law & More သင်ဟာစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကတစ် ဦး ဖြစ်စေဖြစ်စေတရား ၀ င်ပြissueနာတိုင်းဟာများလွန်းနေပြီးမည်သည့်ဥပဒေရေးရာပြanyနာကမဆိုမင်းရဲ့ဘဝအပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အများစုဥပဒေကုမ္ပဏီများနှင့်မတူဘဲ, Law & More သင်အပိုတစ်ခုခုကမ်းလှမ်း
ဥပဒေကုမ္ပဏီအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေ၏သတ်မှတ်ထားသောareaရိယာကိုသာသိရှိပြီးလှုပ်ရှားမှုများပုံမှန်ပြုလုပ်သောနေရာများတွင်၊ Law & More သင့်အားမြန်ဆန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကျယ်ပြန့်သောနှင့်တိကျသောဥပဒေရေးရာဗဟုသုတများအပြင်သင်ကိုယ်တိုင်ချဉ်းကပ်မှုအားပေးသည်။ ဥပမာ - ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မိသားစုဥပဒေ၊ အလုပ်သမားဥပဒေ၊ ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေ၊ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် Law & More စက်မှုလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်လက်လီရောင်းဝယ်မှုစသည့်ကဏ္ various အသီးသီးမှစွန့် ဦး တီထွင်သူများအတွက်ဆောင်ရွက်သည်။ သင်အခြားဥပဒေနယ်ပယ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါသလား ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေနယ်ပယ်အားလုံးဖော်ပြထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။
၏ကျွမ်းကျင်မှု Law & More
မည်သို့ပင်ဥပဒေရေးရာပြissueနာအမျိုးအစား, ငါတို့ Law & More ရှေ့နေများသည်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်မှအစမှအဆုံးတိုင်အောင်သင့်ကိုလမ်းပြ။ ကူညီနိုင်သည်၊ သူတို့၏အလုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာစဉ်းစားပြီးအဆင့်မြင့်သောနည်းဗျူဟာပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပုဂ္ဂလိကတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တရား ၀ င်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ တရား ၀ င်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုရောက်တဲ့အခါ Eindhoven မှကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကသင့်အတွက်တိုက်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်လူတိုင်းသည်မိမိတို့၏အခွင့်အရေးများအတွက်ရပ်တည်ရန်အခွင့်အရေးရှိသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးအချိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားကြသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်သူ့ဟာသူပေးဆပ်မည်ကိုသင်သေချာစေနိုင်သည်။ သို့သော် Law & More တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကြံပေးနှင့်တရားရေးအကြံပေးအဖြစ်သာမကကမ်းလှမ်းမှုရှိသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အနေဖြင့်လည်းသင်ရရှိနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏နယ်သာလန် (လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ) ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောဗဟုသုတအပြင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသည်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှု၏အတိုင်းအတာနှင့်သဘောသဘာဝအရနိုင်ငံတကာသာမကသာမကအဆင့်မြင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များလည်းပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်ရုရှားဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်သောဘာသာပေါင်းစုံရှေ့နေများနှင့်ဥပဒေပညာရှင်များပါ ၀ င်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရား ၀ င်ပြwithနာတစ်ခုခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလားဆိုတာပါပဲ။ Law & More ရှေ့နေတွေကသင့်အတွက်ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်လုပ်ကိုင်နည်းကိုသင်သိလိုပါသလား။ ထိုအခါကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဒါကြောင့်သင်ကကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းရုံး၏ဗဟုသုတကိုရှာဖွေနေပါသလား ဒါပေမယ့်သင်သေးငယ်တဲ့စတိုးဆိုင်ရုံးလိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆက်အသွယ်ရှိလိုပါသလား? ထိုအခါ Law & More သင့်အတွက် Eindhoven ဥပဒေကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Law & More Eindhoven ရှိသိပ္ပံဥယျာဉ်တွင်တည်ရှိပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖောက်သည်များ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိဆီလီကွန်တောင်ကြားဟုခေါ်သောတက်ကြွ။ ဘက်ပေါင်းစုံစည်းမျဉ်းဥပဒေဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Eindhoven ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်သင့်ကိုအခြားရုံးများထက်သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ဥပမာ - Eindhoven ၏ရုံးခန်းသည်ရှည်လျားသောဖွင့်ချိန်များရှိပြီးညနေနှင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်လည်းဖွင့်သည် (မွန် / သောကြာ ၈း၀၂ နာရီ ၂၂ နာရီ၊ Sat / So 8.00 - 22.00) ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်လုပ်လေ့ရှိပြီးသင့်စာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေကြားရန်သို့မဟုတ်သင်၏ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖုန်းကိုဖုန်းမဆက်မီအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရန်မလိုပါ။